Etu ị ga-esi nye gị ikike iji njem njem? Ndi enwetara ikike inye njem njem site n’aka e-Government? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraEtu ị ga-esi nye gị ikike iji njem njem? Ndi enwetara ikike inye njem njem site n’aka e-Government?
30 / 03 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Ụgbọelu, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
Etu ị ga-esi nweta akwụkwọ ikike njem?
Etu ị ga-esi nye gị ikike iji njem njem? Inweta Asambodo Inye ikike njem site n’aka E-Government? Ihe ndị achọrọ maka Inweta Nkwado Njem? Kedu onye nwere ike inweta akwụkwọ ikike njem ahụ?
Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan kwuru na nkwupụta a "travel njem ndị a metụtara n'okpuru ikike nke ndị gọvanọ" gbasara ikikere njem njem nke etiti. Dabere na okirikiri na weebụsaịtị nke Ministry of Interior; Njem ụgbọ ala nke na-agaghị abanye agaghị ekwe omume belụsọ ụmụ amaala nwere ọnọdụ ndị e weere dị ka ndị kwesịrị ekwesị site n'aka ndị isi. Citizensmụ amaala nwụrụ na ndị ikwu ogo ogo mbụ ma ọ bụ nwee nnukwu ọrịa na ụmụ amaala na-enweghị ebe ha ga-anọ, ọkachasị n'ime ụbọchị iri na ise gara aga, nwere ike itinye akwụkwọ maka ndị gọvanọ ma ọ bụ ndị nchịkwa mpaghara iji nweta ikike njem.
Na mgbakwunye, ndị na-egosi na aka ha dị na nrụpụta na ntinye usoro sitere na ụlọ ọrụ ọkachamara dị mkpa, ndị ahụ bụ ndị isi ọrụ ọha na ndị na-enye ọrụ ọhaneze agaghị enwe ihe mgbochi njem.
Etu ị ga-esi tinye akwụkwọ nkwekọrịta ọrụ TRAVEL?
Citizensmụ amaala nwere ikike ịme njem n'etiti obodo ga-etinye aka na Njikọ Nlekọta Njem, nke a ga-ehiwe n'okpuru nhazi nke ndị gọvanọ na ndị gọvanọ mpaghara, ma rịọ maka akwụkwọ njem. Maka ndị a lere anya na o kwesịrị ekwesị, ndị bọọdụ ga-enye akwụkwọ ikike njem njem bọs, gụnyere ụzọ njem na oge ha. A ga-eme atụmatụ njem ụgbọ ala nke Kọmitii Mpụ Njem, a ga-agwa ndị dị mkpa.
Kọmitii Ikikere Njem ga-edepụta aha ụmụ amaala ga-eji bọs, ekwentị ha, na ndepụta ndị njem, ndị akọwapụtara adres ha na ebe ha na-aga, ndị gọvanọ n’obodo ahụ a ga-eleta. Esgbọ ala ndị kwere ka ha nwee njem ga-akwụsị na ọdụ ụgbọ ala mpaghara na-aga n'okporo ụzọ njem ha ma nwee ike iburu ndị njem a na-ekwe ka ha gaa site na gọvanọ nke ógbè ndị ha kwụsịrị ebe enwere ike na ikike ha. A ga-amachibido ọrụ ụgbọ ala ụlọ ọrụ.
A NA-AN CK C AK PERKỌ MARA EGO NA-EKWU NSOGBARA EGO?
Onye isi oche mgbanwe mgbanwe nke Onye isi ala ekwuputala na enwere ike ịnweta akwụkwọ ikike ikike njem njem site na e-Gọọmentị ugbu a. Na nkwupụta o dere na akaụntụ Twitter ya, "citizensmụ amaala anyị ga-aga njem nke oke coronavirus agaghịzi achọ ịga gọvanọ mpaghara. Ngwa Nye ndị njem njem nọ na e-Governmental portal.
Tinye site na e-Government Gateway
Aga-ebugharị akwụkwọ anamachọihe Njem Nlegharị njem gị na ndị Board ga-enyocha ya.
Mgbe nyocha nke Board Permit Board mere, a ga-agwa ndị ahụ na-achọ akwụkwọ ozi site na SMS ka "anatala ngwa gị" ma ọ bụ na a jụrụ ngwa gị.
A ga-anabata ụmụ amaala nke anakwere akwụkwọ anamachọihe ha na Ebumnuche Ngwa emepụtara na ọdụ ụgbọ ala ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu, mgbe ejiri nkwenye ha gosi nọmba TR.
ERTKPỌ AKPỌ MAKA TRAVEL PERMIT
Gbọ elu ụgbọ ala na ụgbọ ala na-enweghị ikikere Njem
Ngwa inye ndị njem nnabata nke ndị na-emepụta tii bidoro
EpttAVM Nkpuchi Nkesara Nye E-Government! Yabụ, Kedu ka esi zụta E-Government Free Mask?
Ọzụzụ maka Asambodo Amateur Seaman na Asambodo Ntanetị Radio Distute
Akwụkwọ SRC bụkwa na e-Gọọmentị
TCDD Transportation Inc. İŞKUR ga-eme ka ọrụ site na mkpara!
Pamukova Na-enwe Mberede Na 15 Afọ Agafeela Ma A Naghị Anagide Nkuzi
Rayhaber Inwere ike denye aha na akwụkwọ akụkọ na - akwụghị ụgwọ site na e-mail (Ozi pụrụ iche)
Di na nwunye, Na-emegide Mwepụ nke Minibuses na GMK Boulevard
Mkpa ọ dị na-agafe okporo ụzọ n'elu Bay Bridge
Pamukova 13 Year Over Train Aope!